Ugu yaraan 10 qof, ayaa ku dhimatay, iyadoo 17 kalena ku dhaawacmeen weeraro isqarxin ah oo baabuur loo adeegsaday.
Wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka, Mahdi Maxamud Cali, ayaa sheegay in afar askarta dowladda ah ay ku dhinteen isla markaana ugu hiraan lix ka mid ah dadkii weerarka soo qaaday ay sidoo kale ku dhinteen.
Wuxuu sheegay in baabuur ay saaran yihiin ilaa lix rag ah oo uu sheegay in ay al-Shabab yihiin uu isku dayay in uu xoog ku galo iridka hotel Jazeera balse uu ku dhacay gaari uu watay sarkaal booliiska ka tirsan kadibna uu qarxay.
Isagoo intaas ku daray in kadib ay ragii baabuurka saarnaa dagaal lala galeen oo qaarkood ay xirnaayeen waxyaabaha qarxa kuwaas oo rasaasta kadib qarxay iyaguna
Wararka ayaa sheegay in qaraxa hore kadib rasaas la is waydaarsaday.
Hoteelka Jazeera oo u dhow garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa caan ku ah siyaasiyiinta iyo wasiirada dowladda
Baabuurta caafimaadka ayaa la sheegay in ay goobta tagaan markii uu qaraxu dhacay.
Raadiyayaal ku hadla afka al-Shabab, ayaa laga dhagaystay in ay ku tilmaameen weerar lagu guulaystay oo ay qaadeen.
Kooxda maleeshiyada Islaamiga ah ee alShabab ayaa laga saaray Muqdisho sanadkii 2011 balse wali waxay sii wadaan weerarada lagu qaadayo caasimadda.